Bandhiga buugaagta oo ka furmay Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
[ September 13, 2020 ] Masuuliyiinta Soomaaliya oo kulan looga hadlayo doorashada uga furmay Muqdisho	Somalia
HomeSomaliaPuntlandBandhiga buugaagta oo ka furmay Garoowe
July 28, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo marwadiisa Hodan Siciid Ciise oo ka qaybgalay bandhiga buugaagta Garoowe. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah si rasmiya u furay bandhiga buugaagta ee Garoowe.
Dhowr qoraa oo Soomaali ah oo uu kamidyahay suugaan uruuriyaha Soomaaliyeed, Axmed Faarax Idaajaa ayaa kasoo qaybgalay bandhig bugaageedka.
Prof Lidwien Kapteijins, oo ah qoraaga buuga “Clan Cleansing in Somalia” ayaa sidoo kale kasoo qaybgashay, waxaa si lamid ah isna kasoo qaybgalay Dr. Georgi Kapchits, oo ah cilmibaare Ruush ah oo muddo 40-sanno ah baranayay luuqada Soomaaliga, qorayna buugaag badan oo maahmaahyo iyo sheekooyin Soomaali ah.
Bandhig bugaageedka ayaa waxaa soo agaasimay machadka horumarka iyo cilmnaarista ee SIDRA, waxaana lagu qabtay qol weynaha shirarka ee Jaamacada Bariga Afrika faraceeda Garoowe.
Bandhiga buugaagta ee Garoowe. Sawirka: Puntland Mirror.
In kabadan shan boqol oo buug ayaa lagu soo bandhigay bandhiga sida uu Puntland Mirror u sheegay sarkaal katirsan Jaamacada Bariga Afrika.
Inta uu socdo bandhiga, qoraayaasha ayaa soo bandhigaya buugaagtooda waxayna iibin doonaan boqolaal buug oo koobi ah.
Si kastoo ay hataaba, buugaagta intooda badan waxay ku qoranyihiin Af-Soomaali, balse waxaa kale oo jira buugaag badan oo ku qoran English.
International book fair opens in Garowe
Jabhada Al Nusra ee Suuriya ka dagaalanta oo iclaamisay in ay ka go’een urur weynaha al-Qaacida
Garowe-(Puntland Mirror) The Director General of Puntland Ministry of Interior may be fired after allegations of corruption, sources close to the matter told Puntland Mirror. For the past weeks, the relationships between the Ministry of [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Sabti ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dalka Britain u fadhiyi doona gudaha Soomaaliya David William Concar. Kadib guddoonka waraaqaha aqoonsiga [...]